အရာရာတိုင်းကို ရင်ဘတ်ကြီးထဲထည့်ပြီး လျှောက်နေလို့မရဘူး – Shinyoon
အရာရာတိုင်းကို ရင်ဘတ်ကြီးထဲထည့်ပြီး လျှောက်နေလို့မရဘူး
နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ ။ငါသာ သူ့နေရာမှာဆိုပြီး ကိုယ့်ဘက်က အစစအရာရာ လိုက်ပြီးကိုယ်ချင်းတွေစာပြီး ကိုယ်ပဲ . . .ပူပန်မှုတွေနဲ့ နေမရ ထိုင်မရတွေ ဖြစ်နေတတ်တာလေ ။ ဘာများအဆင်မပြေဘူးလဲ တစ်ခုခုများ ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ဘ၀. .ရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ စိုးရိမ်းစိတ်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပူတာ မဟုတ်ပဲ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားလူအတွက်ပေါ့ ။
ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ နောက်တစ်ခုက . . . ငါမရှိရင် သူအဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိပ်စက်နေတတ်တာပဲ ။ ငါမှ မလုပ်ပေးရင် အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အစစအရာရာ လိုက်ပြီး လုပ်ပေး နေရာတကာ ကိုယ်က၀င်ပါပေး စိတ်လဲ ပင်ပန်းရသလို လူလဲ ပင်ပန်းရပါတယ် ။ ငါ မရှိရင် သူဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်တွေလဲ ချုပ်ပစ်လိုက်တယ် ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုယ် ပိတ်လှောင်ပစ်လိုက်တယ်လေ ။
တကယ်ဆိုရင် . . . ငါမရှိရင် နေရာတကာတိုင်း အဆင်မပြေတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်မရှိတဲ့အခါလဲ ကမ္ဘာကြီးက သူ့အလိုလို လှည်ပတ်နေတာပါပဲ ။ ကိုယ်မရှိရင် ကိုယ့်နေရာမှာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လှည်ပတ်နေမှာပဲလေ ။ ဒီအတွက် သိပ်ပြီးအပင်ပန်းခံပြီး မတွေးနဲ့ ။ တစ်ခါတစ်လေဆို . . . ကိုယ်မရှိရင် ပိုပြီး ပျော်တတ်ကြတဲ့လူတွေလဲ အများကြီးပါ ။ နေရာတကာ ငါ ရှိမှ ဖြစ်မှာ ငါ ပါမှ ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အစစအရာရာ လိုက်လုပ်ပေးနေရင်တော့ လူမုန်းပိုပြီးများသေးတယ် ။
ဘ၀ . . .စလုံးရေစကတည်းက ခက်ခဲမယ် ကြမ်းတမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာပါ ။ အဲ့ဒီ ခက်ခဲတဲ့ဘ၀မှာ မနေတတ်တဲ့သူတွေက ပိုပြီး ခက်ခဲတတ်ကြတယ်လေ ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ကိုယ့်အတွက် မဟုတ်ပဲ တခြားတစ်ယောက်အတွက် အသက်ရှင်ချင်နေတဲ့သူတွေက ဘ၀မှာ ပိုပြီး ခက်ခဲတတ်ကြတာပါ ။
ကိုယ်မရှိလဲ အဆင်ပြေနေတာပဲဆိုတဲ့အသိလေး နဲနဲလေးဖြစ်ဖြစ် ၀င်ကြည့်စမ်းပါ ။ကိုယ်မရှိလဲ တကယ်ကို အဆင်ပြေနေမှန်းသဘောပေါက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က ပိုပြီးနေတတ်လာမယ်လေ ဘ၀ . . . အရာရာတိုင်းကို ရင်ဘတ်ကြီးထဲထည့်ပြီး လျှောက်နေလို့မရဘူး အရာအားလုံး လေးကန်ကုန်လိမ့်မယ် တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘ၀ကို ဘာကိုမှ မဆုပ်ကိုင်ထားပဲ ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလဲ ဖြတ်သန်းတတ်ရတယ် ။
လောကကြီးက မာယာမများဘူး ကံတရားကလဲ မလှည့်စားဘူး လူတွေကသာ . . .
ဘ၀ . . . အရာရာတိုင်းကို ရင်ဘတ်ကြီးထဲထည့်ပြီး လျှောက်နေလို့မရဘူး